Lego Batman set သည်ကောလဟာလ LEGO ကိုဖော်ပြသည် Star Wars လက္ခဏာ
14 / 10 / 2021 14 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 237 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၁၈၁ Batmobile: Penguin Chase, Batman, Dc, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, LEGO.com, Matt ရိဗ်, ကောလာဟလာ, Star Wars, အဆိုပါ Batman, အဆိုပါ LEGO Group
လာမယ့်နှစ်အတွက်နောက်ထပ်သတင်းသစ်တစ်ခု Lego Star Wars The ကိုအခြေခံထားတဲ့လေးစုံထဲကတစ်ပွဲမှာ line-up ကိုထုတ်ဖော်ပြီးသွားပြီဖြစ်နိုင်တယ် Batman.
အသစ်ပေါ်လာသောပစ်ခတ်မှုယန္တရားအမျိုးအစားအသစ်၏အစီရင်ခံစာများတွင်ပါ ၀ င်သောရိုးရာစတူဒီယိုသေနတ်သမားကိုအစားထိုးရန်ပြောဆိုခဲ့သည် Lego 2014 ကတည်းကအစုံ ပြီးခဲ့သည့်လကပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်၂၀၂၂ မှာလာမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ကောလဟာလ ၇၅၃၂၁ Razor Crest Microfighter အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုပူးတွဲဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီ့သေနတ်သမားအသစ်ရဲ့နောက်ကွယ်ကအသေးစိတ်အချက်တွေကိုအခုထိအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး အသစ် Lego DC Matt Reeves 'The မှုတ်သွင်းထားသောຊຸດများ Batman လာမယ့် Microfighter တွင်ပွဲ ဦး ထွက်မည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေသော projectile element အသစ်သည်ကောင်းမွန်စွာပါဝင်နိုင်သည်။
၇၆၁၈၁ Batmobile: Penguin Chase ၎င်း၏မူရင်းနာမည်ကျော် Bat-villain ကိုတစ်စတစ်စပိုပိုပြီးပိုအားကောင်းလာစေသောစတန့်သေနတ်သမားတစ် ဦး နှင့်တပ်ဆင်ထားသော်လည်း၎င်းကိုအလားတူနည်းလမ်းဖြင့်လည်ပတ်ရန်ကြိုးစားဆဲဖြစ်သည်။ အပေါ်ဆုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် 2014 × 1 ပတ်လည်ကိုစတင်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏စည်မှပန်းကန်
ဤအရာသည်အကယ်လို့နောက်နှစ်တွင်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်ဟုယူဆရသောပစ်ခတ်မှုယန္တရားအသစ်သာဖြစ်သည် Lego Star Wars အစုံ၊ ၎င်းသည်သီအိုရီအရ 75230 Hoth Battle Pack တွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ အစီရင်ခံစာများအရ၎င်းသည်တိုက်ပွဲအထုပ်များထံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည် Lego Star Wars ၂၀၂၁ တွင်သူတို့၏တစ်နှစ်တာပိတ်ပြီးနောက်တန်းစီသည် စွန့်ပစ် classic လုံးသေနတ်သမား.
၎င်းသည် standard blaster element များကိုနှစ်သက်ပုံရသော်လည်း capa တွင်ဤလက်ကိုင်သေနတ်အသစ်ပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အံ့သြခြင်းမရှိပေ။city, ထိုအဖြစ် Lego အဖွဲ့သည်၎င်းတို့ကိုပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်ထုတ်လုပ်နိုင်သမျှအပိုင်းသစ်များကိုတတ်နိုင်သမျှများများဖြန့်လေ့ရှိသည်။
၇၆၁၈၁ Batmobile: Penguin Chase ၂၀၂၁ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာ ၁ ရက်တွင်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတို့တွင်လက်ရှိ pre-order မှာယူနိုင်ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင်စတင်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်သည်။
← LEGO ၀ ယ်ရန်အကြောင်းပြချက်ငါးချက် Star Wars 75192 ခုနှစ်တွင် 2021 ထောင်စုနှစ်စွန်ငှက်
LEGO Harry Potter 40452 Hogw ကိုပထမဆုံးကြည့်ပါarts Gryffindor အိပ်ဆောင် →